पर्वत वेलफेयर सोसाइटी यूकेले अप्रिल २२ मा नयाँ वर्ष शुभकामना साँझ गर्ने ! – ebaglung.com
पर्वत वेलफेयर सोसाइटी यूकेले अप्रिल २२ मा नयाँ वर्ष शुभकामना साँझ गर्ने !
२०७३ फाल्गुन ३, मंगलवार १५:२९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
युके २०७३ फागुन ३ । पर्वत वेलफेयर सोसाइटी यूके को फेब्रुअरी १२ मा बसेको बैठक ले अप्रिल २२ मा नेपाली नया वर्ष शुभकामना साँझ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। अल्डरसटको एम्पाएर हलमा हुने उक्त कार्यक्रम सफलतापुर्बक आयोजना गर्न संस्थाका सल्लाहकार मान प्रसाद गुरुङ को संयोजकयतोमा कमिटि गठन गरिएको छ। साथै बैठकले स्थानिय नेपाली समुदायलाई कार्यक्रममा उपस्थित भै नयाँ बर्ष उल्लाषमय बातावरणमा मनाउन आवहान गरेको छ ।
यसै गरि सो संस्था ले सदस्यता प्रणाली लागु गर्ने भएको छ। पर्बत जिल्लाबाट आएर बेलायत मा बसोबास गर्ने पर्बत जिल्लाबासीहरुलाई समेट्ने उदेश्यले लागु गरिएको सो सदस्यता साधारण र आजीवन गरि २ प्रकारको हुने छ। हाल सम्म आजीवन सदस्यता लिनेहरुमा दधि आचार्य, दिपक जोशी, याम भण्डारी, मान प्रसाद गुरुङ, मेक बहादुर पुन, भिम बहादुर पुर्जा, नेत्र बहादुर आले, काजी गुरुङ, पुरन गिरि, हितकाजी गुरुङ, नारायण गिरि, राज कुमार गुरुङ, बिनोद पुरी, कुल राज गुरुङ, परशुराम गुरुङ, गुप्त आले, गंगाबहादुर खोर्जा, जुवारी लाल गुरुङ, अंग गर्बुजा, भरत पौड्याल, धन बहादुर गुरुङ र सन्जीब गुरुङ सहित २२ जना रहेका छन्। साथै सो संथाले सदस्यता बनाउन अझ सक्रिय भएर लाग्ने निर्णय गरेको छ।
महासचिब भरत पौड्यालले संचालन गरेको सो बैठकमा कार्यसमितिका उपाध्यक्ष सन्जीब गुरुङ , कोषाध्यक्ष नेत्र आले , सचिब बिनोद पुरी र सदस्यहरु भिम पुर्जा, अंग गर्बुजा, मेख तिलिजा र गंगा र्खोजालाई हितकाजी गुरुङ र मान प्रसाद गुरुङले खादा लगाएर स्वागत गरेका थिए भने दधि आचार्यले सल्लाहकारहरु हितकाजी गुरुङ, पुरन गिरी , याम भण्डारी , मान प्रसाद गुरुङ, काजी गुरुङ, परसुराम गुरुङ, जुवारीलाल गुरुङ, गुप्त आले, धन बहादुर गुरुङ लाइ खादा लगाएर स्वागत गर्नु भयो। साथै भूपू कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष दिपक जोशीलाइ बिदाई गरेका थिए। यसै गरि Parbat welfare society UK का संसथापक महासचिब युवन गुरुङलाइ पनि स्वागत गरिएको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष दधि आचार्य को अध्यक्षयतामा वसेको कार्यसमिति ले नया बर्ष मनाउने निर्णय गरेको हो
नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको अध्यक्षमा नवराज भुसाल सर्वसम्मत !
नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङको अध्यक्षमा दिल शिरिस सर्वसम्मत !